သငျသညျ CRIMSON ဒီရေပရိသတ်တွေမှပြောရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်သမျှ - နှုန်းထားများ
Alabama အဘိဓါန်ပရိတ်သတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းဖို့အသုံးပြုကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲမုန်းတီးသူများသည်နံပါတ်တစ်ဖြစ်ခြင်း၏သဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဘေးထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ Us Bama ပရိသတ်များသည်မနာလိုမှုအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ သို့သော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြားနာရန်ဒေါသထွက်စေသောအရာအချို့ရှိသည်။
'' Alabama အဘိဓါန် overrated '
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်၊ အပတ်ကတစ်ပတ်အကြာ, Bama ပရိသတ်များသည် Alabama ဘောလုံးပွဲကိုအစဉ်အမြဲကြားရလေ့ရှိသည်။
ဒီနေရာမှာ #NationalChampionship #RollTide မှာ Derrick Henry ရဲ့ပထမဆုံးဝက်ဝံ touchdowns တစ်ခု
၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်၊ ည ၇း၁၅ နာရီတွင် Alabama ဘောလုံး (@alabamafbl) မှတင်ထားသောဓာတ်ပုံ
အကယ်၍ သင်သည် Bama ကိုအလွန်အကျွံမသုံးလိုလျှင်၊ အချက်အလက်အားလုံးကိုကြားရန်ပြင်ဆင်ပါ။ အမျိုးသားချန်ပီယံ ၁၆ ခု၊ Heisman ဆုဖလား ၂ ခု၊ SEC ချန်ပီယံ ၂၅ ခုနှင့်အစီအစဉ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုလုံး။
တ ဦး တည်းပင်ကြောင်းပြန်ဆိုသနညျး
'ဘယ်အချိန်မှာ Saban အနားယူသလဲ?'
Alabama အဘိဓါန်ပရိသတ်များနစ်ခ် Saban ကိုးကွယ်။ သူ၏ကြေးဝါရုပ်တုသည်ချန်ပီယံလိဂ်၏လမ်းလျှောက်ပေါ်ရှိဒဏ္legာရီဟောင်း Bama နည်းပြများ၏ဘေးတွင်ရပ်နေသည်။ အဆိုပါရုပ်တုသည်သူ၏အတော်လေးတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နည်းပြအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတရားမျှတမှုမကျင့်ပါဘူး။ Bama ပရိသတ်များသည်သူတစ်ချိန်ချိန်တွင်သူသည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ၌သူ၏လိမ္မာသောပြက်လုံးများကိုဆွဲချကာသူ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသိသည်။ ဖြစ်စဉ် အောင်မြင်မှုတစ်ခု
နည်းပြ Saban သည် @espncfb မှလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း SEC တွင်နံပါတ် ၁ နည်းပြအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ #RollTide
၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလ ၂၆ ရက်ည ၁၂ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် Alabama ဘောလုံး (@alabamafbl) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ
မည်သည့် Bama ပန်ကာကမျှထိုနေ့ကိုစိတ်ကူး။ မရသည့်အတွက်မည်သည့်အခါကမျှမထွန်းကားသင့်ပါ။ အချိန်တန်လျှင်ရောက်လာလိမ့်မည်။ အခုအချိန်မှာတော့ Bama ပရိသတ်တွေကသူ့ကိုအဆုံးအထိကိုးကွယ်လိမ့်မယ်။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းမပြောလိုပါ။ ဟင့်အင်း၊ နောက်တဖန်မကြည့်ချင်ပါ။
Alabama ကစားသမားများသည်ခြောက်ပွဲကစားခြင်းအကြောင်းကိုမုန်းတီးရုံသာမကဘဲသူတို့ကထပ်ခါထပ်ခါပြန်ကစားသည့်အခါမမြင်လိုကြပါ။ ဒီပြဇာတ်ကို Alabama ပရိသတ်အတွက်ပြောတာက chalkboard ပေါ်မှလက်သည်းများခြစ်ရာကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Bama ပန်ကာနှင့်စကားပြောသောအခါသင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးသည်မှာဘာမျှမပြောရန်ဖြစ်သည်။ Auburn သည် Iron Bowl နှင့် Bama ရှုံးနိမ့်မှု၏နောက်ဆုံးပွဲတွင် ၆ မှတ်ရပြီးနောက်တစ်ကြိမ်တွင်? ငါသည်သင်တို့ကိုသူတို့၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကတိပေးနိုင်ပါတယ်။
'Roll Tide ဆိုတာဘာလဲ?
ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်သင်မေးရန်လိုအပ်လျှင်သင်သိရန်မထိုက်တန်ပါ။ Roll Tide ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ Alabama မှပရိသတ်မည်သူမဆိုစကားလုံးများဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်မထင်ပါ။ ငါတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါ။ ဒါဟာငါတို့ရဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ် ဒါဟာသင်ကစမ်းသပ်မှုကျရှုံးတစ် ဦး ဖြစ်သနည်း ကိုယ်လည်းပဲ။ ဒီရေ Roll!
ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ Bama ပန်ကာမဟုတ်သူမည်သူမဆိုမှဖော်ပြမရနိုင်ပါ။
'' Alabama အဘိဓါန်မင်းဆက်ကျော်ဖြစ်ပါတယ် ''
Alabama အဘိဓါန်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်မှပထမ ဦး ဆုံးအစဉ်အဆက်ကောလိပ်ဘောလုံး PLAYOFF အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အခါ 2014 ခုနှစ်တွင် Non- Alabama အဘိဓါန်ပရိတ်သတ်တွေကနေလေထုဖြည့်သောဟောပြောချက်, Alabama အဘိဓါန်ရဲ့မင်းဆက်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
@SEC ရက်သတ္တပတ်၏ထိုးစစ်ကစားသမား Jalen နာကျင် #ByTheNumbers ။ #RollTide pic.twitter.com/bwuK7W2R3y
- Alabama ဘောလုံး (@AlabamaFTBL) စက်တင်ဘာ 22, 2016
ငါ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းသိပ်စကားများလွန်းတယ်၊ မင်းဆက်သည်ယခင်ကကဲ့သို့ခိုင်မာသည်၊ ၂၀၁၅ မှာ ၁၆ ကြိမ်မြောက်အမျိုးသားချန်ပီယံဆုကို Jalen Hurts ကသူကစားတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားပြီးတဲ့နောက်မှာ ၁၇ နှစ်အထိကြာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
'' မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး ''
Alabama အဘိဓါန်ဒီဂိမ်းအနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ Alabama အဘိဓါန်အဆိုပါ SEC အနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ Alabama အဘိဓါန်အခြားအမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ Alabama အဘိဓါန်ပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အသင်းအနိုင်ရလို့မရဘူးပြောခံရဖို့ကိုမုန်း။ အနိုင်ရလို့မရဘူးလို့သူတို့ကိုမင်းပြောလိုက်ရင်သူတို့ကအနိုင်ရလိမ့်မယ်။
2015 ခုနှစ်တွင် Ole အလှမယ်သူပုန်များ Alabama အဘိဓါန်သူတို့ရဲ့ရာသီ၏ပထမ ဦး ဆုံးဆုံးရှုံးမှုကိုပေး၏။ Alabama အဘိဓါန်သည်ကောလိပ်ဘောလုံး PLAYOFF သို့ရောက်ရန်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့အနိုင်ရရုံတင်မကဘဲအရီဇိုးနားရှိထုပ်ပိုးထားသောအားကစားကွင်းရှေ့တွင်ထိုရွှေတံဆိပ်ဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ NCAA ကိုထပ်မံသက်သေပြခြင်းအားဖြင့်၊ Alabama ဘောလုံးအသင်းကတကယ်လုပ်နိုင်တယ်။
Big ring ။ #RollTide
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ 29ပြီလ ၂၉ ရက်ညနေ ၂း၀၀ တွင် PDT ၌ Alabama ဘောလုံး (@alabamafbl) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ
ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့် Alabama ပြည်နယ်ပန်ကာကိုသူတို့အဖွဲ့ကစင်မြင့်ကြီးထဲကိုမဝင်နိုင်ဘူးလို့ပြောရင်မင်းရဲ့လျှာကိုကိုက်ချင်လိမ့်မယ်။
အနည်းဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့သေချာတာပေါ့၊ ဒီစကားလုံး ၂ ခုဟာ Alabama အဘိဓါန်ပန်ကာတိုင်းကိုမြည်လာစေတယ်။ သငျသညျတစ်ခု Alabama အဘိဓါန်ပန်ကာမှထိုစကားလုံးများကိုဝံ့ဝံ့မနေသင့်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ War Eagle ဟာဘာမန်ပရိသတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမုန်းတီးရတာလဲလို့သင်စဉ်းစားမိနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ Iron Bowl သည် Alabama ပြည်နယ်၏အကြီးမားဆုံးပြတိုက်ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရသူသည်ဂုဏ်အသရေအားလုံးရရှိပြီးလာမည့်နှစ်တွင် Iron Bowl ပြန်မရောက်မချင်း Alabama တွင်ပြည်နယ်၏ထိပ်တန်းခွေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။